विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आवश्यकता आयातका लागि मात्र हो ? | Notebazar
काठमाण्डौं । २५बैशाख, २०७९, आईतवार / May 08, 2022 15:53:pm
वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति के हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा देशको केन्द्रीय बैंकमा रहेको विदेशी मुद्राको निक्षेप भनेर मानिसहरु सजिलै भन्न सक्छन । विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई आधिकारिक रुपमा अन्तराष्ट्रिय सञ्चितिको संज्ञा पनि दिने गरेको पाइन्छ ।
विशेषगरी विश्वव्यापी रुपमा अमेरिकी डलरमा नै व्यापारिक सम्झौता तथा कारोबार हुने हुँदा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति अमेरिकी डलरमा गरिने गरिएको छ । तथापि पाउन्ड स्र्टलिङ, युरो, येन, युवान जस्ता मुद्राको पनि विदेशी सञ्चिति गर्ने गरिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुनको भण्डारण, विशेष रेखाचित्र अधिकार (एसडीआर) र अन्तरााष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) रिजर्भ स्थिति पनि समावेश गरिएको हुन्छ ।
वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अर्थ थाहा भए पनि यसको प्रयोग र यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव बारे धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । वर्तमान परिवेशमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा कमी भएकै कारण नेपाल सरकारले विलासी उपभोग्य सामानको ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसरी पनि थाहा हुन्छ कि वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति सामान आयातको लागि प्रयोग गरिन्छ । तर यसो भन्दै गर्दा मुद्रा सञ्चिति आयातमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ भन्ने हुँदैन ।
देशमा कति वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति संकलित छ भन्ने आधारमा देशको मौद्रिक नीति निर्माण हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा कारोबार गर्न मात्र नभई ऋण तिर्नको लागि पनि वैदेशिक सञ्चिति प्रयोग हुने गरेको छ । यसका साथै देशको अर्थतन्त्र कति सबल भन्ने निर्धारण पनि वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति कति छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।
विदेशी पूँजी प्रवाहमा समस्या आउँदा देशमा उपलब्ध भएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपाल जस्तो रेमिट्यान्स निर्भर देशमा रेमिट्न्यासमा आएको कमीका कारण नै वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा कमी आउने गरेको छ । यस्तै बाह्य धक्काबाट देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित हुन नदिन पनि वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको आवश्यकता पर्छ ।
यसका साथै देशमा संकट उत्पन्न भएको समयमा स्वदेशी मुद्रा कमजोर हुँदा बलियो बनाउनलाई पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति आवश्यक हुन्छ । जस्तैः रुसले युक्रेनमा विशेष सैनिक अप्रेसन सञ्चालन गरेपछि रुसी रुबल अहिले सम्मकै कमजोर अवस्थामा पुग्यो । मुद्राको मूल्य थप अवमूल्यन हुन नदिन रुसी केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति परिचालन गरेको थियो । पश्चिमा देशहरुले अन्तराष्ट्रिय सबरेन बन्ड डलर मै तिर्न चेतावनी दिएता पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च हुँदा सबै चुनौतीको सामना गर्न सफल रह्यो ।
यसका साथै बैंकिङ प्रणालीमा सिर्जना हुने तरलता अभावको समस्यालाई न्युनिकरण गर्न पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रयोग हुँदै आएको छ । तसर्थ, बाह्य धक्काको सामना गर्न, आयातको भुक्तानी गर्न, अन्तराष्ट्रिय ऋण तिर्न र स्वदेशी मुद्राको मूल्य सन्तुलनमा राख्न विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रयोग गरिन्छ ।
तसर्थ उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति निक्षेप गर्ने राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्र स्थीर र सबल रहने गरेको छ । सन् २००८को वित्तीय संकट पछि राष्ट्रहरुले गर्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा क्रमिक रुपमा वृद्धि भएको छ । अप्रिल २०२२ सम्मको तथ्यांक अनुसार चीनको विदेशी मुद्रा सञ्चिति सबै भन्दा उच्च ३ ट्रिलियन ३०१ बिलियन १९६ मिलियन डलर रहेको छ ।
यसैगरी जापानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १ ट्रिलियन ३ सय ५६ बिलियन ७१ मिलियन डलर रहेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतको सञ्चिति ५ सय ९७ बिलियन ७ सय २८ मिलियन डलर रहेको छ । यसैगरी मार्च महिनामा नेपालको विदेशी सञ्चिति ९ बिलियन ६ मिलियन डलर रहेको छ ।
डलरको भाउ सर्वाधिक महङ्गो हुँदा नेपाली रुपैयाँ इतिहासकै कमजोर 22 hours ago
पश्चिमा प्रतिबन्धहरुका कारण रुसलाई नाटकीय ढङ्गबाट डिफल्ट बनाइँदै 1 day ago
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको वर्चस्वलाई दक्षिण कोरियाली वोन र स्वीडिस क्रोनाले कम गर्दै: आईएमएफ2days ago
विकसित राष्ट्रहरूले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न औसत ब्याज दर वृद्धि गर्दा मुद्रा युद्ध उल्टिँदै6days ago
नेपाली रुपैयाँ झनै कमजोर अवस्थामा, डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च6days ago
शक्तिशाली देशहरुको आर्थिक प्रतिबन्धका बावजुद पनि किन बढ्दै छ रुसी रुबल ? 21/06/2022
फेडले औसत ब्याजदर बढाउने तयारी गर्दै, जापानी येन २४ वर्ष यताकै कमजोर 20/06/2022
नेपाली रुपैयाँ झनै कमजोर, डलरको भाउमा दैनिक रेकर्ड 14/06/2022